7Monkeys: August 2006
2 comments |	Thursday, August 31, 2006
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ ဘေရွတ်မြို့ တော်ရဲ့ ဗုံးအပေါက်ဆုံးနေရာမှာ
ဆွဲထားတာလို့ ”အရိုဖစ်ရှ်” ကပြောပါတယ်။
ဆွဲရတဲ့ အကြာင်းအရင်းအသေးစိတ်ကိုသိချင်ရင် တော့အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက် မှာ သွားဖတ်လို့ ရပါတယ်။
သူရှင်းပြထားတာတိုတိုလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ရင်ကိုလာထိတယ်။
Created By Arofish
at 11:13 PM Permalink
ကျေးဇူးဘဲ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ သစ္စာမဂ္ဂဇင်း၊ မိပျိူ
အခုတလော အမေရိကန်သမ္မတဂျော့်ဘုရ်ှကို သူ့ ရဲ့ စီမံခန့် ခွဲမှူပိုင်းညံ့ ဖြင်းတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
အင်္ဂလန်ရဲ့ Deputy PM John Prescottကဆိုရင်ဘုရ်ှဟာချီးထုတ်လို့Independent Journalမှာ
ဒါနဲ့အီဖေကိုလည်း အားကျမခံပါပါကြီးသန်းရွှေကို နာမည်လေးပေး ပြီး ကလိချင်ရောဆိုပါတော့။
ဒါပေသိ သိတယ်မဟုတ်လား။ပါပါကြီးသန်းရွှေက သူ့ ကိုချီးထုတ်လို့ ပြောရင်ဘုရ်ှနဲ့ နှိူင်းတယ်ဆိုပြီး
ဒေါကီးမှာစိုးလို့သူလည်းစိတ်နှလုံးတော်ကြည်ဖြူ ဘုရ်ှထက်လည်းသာတော်မူအောင်
ဘဝရှင်မင်းတရားအလောင်းမဟာချီးထုတ်ကြီး လို့ နာမည်ကင်ပွန်းရယ်တဲ့ တတ်ပေးလိုက်ချင်သဗျုား။
ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ စံမြန်းတော်မူတဲ့ ဘဝရှင်မင်းတရားအလောင်းမဟာချီးထုတ်ကြီး
ခေတ်မှီင်္ချီးကျ စီမံခန့် ခွဲမှူများနဲ့အီဖေကိုတို့နိုင်ငံတော်ကြီးကို အခုလက်ရှိထက်ပိုပြီးချီးကျအောင်
at 4:26 AM Permalink
ခေတ်သစ်နည်းပညာရယ် လွတ်လပ်ဆန်းသစ်တဲ့ စိတ်ကူး နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့
ဂရပ်ဖ်တီ အာတ် တစ်မျိူး ပေါ်လာရော။တော်တယ်ဗျာ။အားကျမိတယ် အဟုတ်။
အီဖေကိုက နည်းပညာပိုင်းအားနည်းတော့ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်သူဆိုရင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လေးစားတယ်။
အဲ…ကိုယ့်မြန်မာတွေ လုပ်တာဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ အသေလိုက်ကြွားမှာ။
အီဖေကိုက ဒါမျိူးတော့ အိတ်စပတ်…..ဟဲဟဲဟဲ…..
at 3:10 AM Permalink
စာဖတ်သူက ဘောလုံးကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရင် ဒါလေးကြည့် ပြီးဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ်မရယ်ရင်တောင် နည်းနည်းပါးတော့ပြုံးမိမှာကျိန်းသေတယ်။ရှူပ်ရှတ်ခတ်တဲ့ဒီလောကကြီးမှာဒါမျိူးကပျက်ကချော် လွဲနေတာလေးတွေလဲ ရှိမှနေပျော်သဗျ။ ဟုတ်ဖူးလား။နို့ မို့ ဆိုရင် ပျင်းစရာကြီးဗျာ။
နောက်ခံသီချင်းက ဂျင်မီစားတဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ ”အလယ် ”ဆှုိတဲ့ သီချင်း တဲ့ဗျ။
အီဖေကိုလည်း မှတ်ချက်ဖတ်ပြီး သိတာဗျ။ဒါပေသိ ကောင်းတော့ အတော်ကောင်းသဗျ။
၅မိနစ်စာ အချိန်ကုန်ရကြိုးနပ်ပါတယ်။မောင်မင်းကြီးသားတွေ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး
0 comments |	Sunday, August 27, 2006
: "50 Coolest Websites How do we select our finalists? We evaluate hundreds of candidates—some suggested by readers, colleagues and friends, others discovered during countless hours of surfing. Many of this year's choices are shining examples of Web 2.0: next-generation sites offering dynamic new ways to inform and entertain, sites with cutting-edge tools to create, consume, share or discuss all manners of media, from blog posts to video clips. Think we missed one? Send us your thoughts and we'll postaselection of your comments online. There's always next year."
ဘယ်ရမလဲ ကျူပ်ကနစ္စတယ်ရွိုင်းလောက်ကတော့ အပျော့ အပျော့ 
ဆာဒူးကြီးတွေပါ။သူတို့ လဲလူထဲကလူဘဲမို့ ဒါမျိူးတွေကြိုက်တာမဆန်းပါဘူး။
၀ှက်စာနဲ့ မိ်ိ်ိ်မိပို့ ချင်သူဆီပို့ လို့ ရတဲ့ Firefox Extenison ခင်ဗျ။အွန်လိုင်းမေးလ်သုံးသူတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်
သည်IMF၊Amnesty International ကဲ့သို့သောနာမည်ကျော်သမားတော်ကြီးများသာ
ထပ်မံ၍သူမတင်ပြထားသောကုထုံးနှစ်ရပ်(Evidence-based medicine နှင့် Clinical
Audit)တို့တွင် Evidence-based medicene မှာစောဒကတက်ဖွယ်မရှိသော်လည်း
နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ
ဩော် ဘာတဲ့ 
ဗိုက်ဆာလို့ငိုယိုသံတွေ
အပြစ်မဲ့ သူ ဘာလူညာလူတွေ
ကျွန်ုပ်ကို ဂြိုဟ်သိမ် ဂြိုဟ်မွှားမှန်း
ခုမှ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အတွက်
1 comments |	Saturday, August 26, 2006
သားတော့ဗြောင်းဆန်နေပြီ
မျက်ရေတွေလည်း ညောင်းလှပေါ။့ 
မာန်ပြင်းပြင်း အတောင်ဖြန့် တဲ့ 
ရှီဘူရ လို့ ခေါ်တဲ့တိုကျိူရဲ့မြို့ တစ်မြို့ ပေါ့ ။
အဲဒီမှာ လူတွေက နေ့ စဉ်ရက်စက် ပုရွတ်ဆိတ်တွေလို ပျား ပန်းခတ်လွန်းလို့ 
တခါတလေ ခေါင်းထဲမူးနောက်နောက် ဖြစ်ရတယ်။
ရန်ကုန်က “The Ants” ကို ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် လွမ်းမိသဗျား။
he song is "Beef or Chicken", done by the Teriyaki Boyz,aJapanese rap/hip-hop group (obviously). The band is composed of members of Rip Slyme and m-flo. Here's the wikipedia article on them. They haveasong on the soundtrack for "The Fast and the Furious: Tokyo Drift." Chad Arsenault says,
flickr photos: 1, 2, 3, 4.
Original Posted By Boing Boing Blogger Xeni Jardin
ငါ…အံကြိတ်ဖို့ တောင် ခတ်နေရဲ့ ။
နောက်တော့ ပြီးသွားမှာတဲ့ ။
ဒီမှာ အဲဒီနောက်တော့ တွေ
အာသာတငမ်းငမ်း မျှော်ရလွန်းလို့ 
ကဲပါ ဟိုဟိုဒီဒီ လေချွန်ကျ စို့ တဲ့ ။
သူ့မမေးလိုက်ရဘူး
နောက်ဆိုတာ ရှိဦးမလားလို့ ?
ခွာသံတွေက တိတ်တဆိတ်ငြံနေသေးရဲ့ ။
at 3:03 AM Permalink
A million thanks! Yes... A MILLION!!! (Flash Animation)
0 comments |	Friday, August 25, 2006
Weirdest flash animation ever! You gotta see it for yourself! I think i'll be sending this to all of my dearest friends... muehehehehe
Very Funny Advertising Video
Too funny to describe. It is about 60 seconds of funny...
Pluto shows up in support of pluto
Cell Phones of the Future (Photos)
You think your Razr's cool? When it comes to mobile phone design, you ain't seen nothin' yet
Technorati Tags: news, tech
Statistics recently published by the oil cartel OPEC show that Russia is currently extracting more oil than Saudi Arabia, making it the biggest producer of black gold in the world. According to OPEC, in June 2006 Russia extracted 9.236 million barrels of oil, which is 46,000 barrels more than Saudi Arabia.
0 comments |	Thursday, August 24, 2006
This isapretty funny article about what givesaman courage and what makes himahero. The real gem however, is the Courage Quotient Quiz. This asksaseries of ridiculous questions that seem to have nothing to do with “courage” or “heroism”.
Here areafew examples of statements from the quiz thataman with courage would agree with:
* Desk work is more forawoman thanaman
* Any man should love camping and hunting
* I’d rather readadetective story thanahumorous story
Here are few statements that reflect poorly on your courageousness:
* A totalitarian system of government is more efficient
* After most wars, the U.S. came out the loser in the peace treaties
* A cowboy movie is more interesting thanagood love story
Your score .....
Bravo Bravo Bravo Activist
0 comments |	Wednesday, August 23, 2006
Media war is growing up more and more.
Can SPDC resist???Their time is nearly up.Give back Freedom to us.
Technorati Tags: dvb, burma, politics, activist
funny word adventure game
0 comments |	Tuesday, August 22, 2006
York University Creative Writing Group
Choose Your Own Choose Your Own Adventure,afreeform adventure game.
Memememe, an auto-quiz generator you can add questions to.
My Simile Is Like Woah,asimile compare-and-create game.
Technorati Tags: funny, game
Political custom of Burma
Technorati Tags: dvb, burma
An ordinary politician oraChrist? In
this photo Gandhi listens to Muslims during the height of the
warfare which followed the partition of India in 1947.
A must see docu drama about what would happen to the world if drugs were legalized
at 7:03 PM Permalink
Original Blog from www.boingboing.net
I laughed aloud at this Huffington Post "How Right-Wingers See the New York Times" page, where you hover your mouse over the stories in the electronic edition of the NYT to get an idea of how the article will be spun by the Bushie astroturfers, talk-radio mouth-frothers, Fox, and the right-wing blogosphere. Link
ကိုယ်တွေးမိ၊ ငေးမိ်။ သိမိတာလေးတွေကို ပြန်ပြီးပြောပြချင်တာ၇ယ်၊
ယနေ့ မှစ၍ အားအားသမျှ ၊ ကြားကြားသမျှ ၊ သိသိသမျှ အလုံးစုံတို့ ကို
ဤနေရာမှနေ၍ ထင်ရာမြင်ရာစိုင်းကာ မောင်ပေါက်ကျိူင်းအဖြစ်နဲ့ ၊
ရေးတတ်သလို ရိုးရိုးသားသား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးပါမည် (သို့ မဟုတ်) ရေးချင်ပါသည်
ဆိုတဲ့အကြောင်း………..ကြော်ငြာမောင်းခတ၊် ဗျောတင် လိုက်ရပါလေဂုဏ်သတည်း။
အားလုံးကြားကြားသမျှ ဖတ်ကျ၊ ဖတ်ကျ၊ ဖတ်ကျ ပါစေသော်ဝ်………
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါခင်ဗျား။
မှတ်ချက်။ နအဖရဲ့ပါပီကလေး မောင်ပေါက်ကျိူင်းမဟုတ်ပါ။
ရေမရော အသေစောမယ့် မောင်မျောက်ဖေတဖြစ်လည်း မောင်ပေါက်ကျိူင်း ဖြစ်ကြောင်းပါ ။
at 1:17 AM Permalink